Junior Accountant Archives - Page2of2- Glory Assumption Space
Junior Accountant - Female (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောLubircant Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ဘာသာခြား company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ 1 Junior Accountant – Female (5)Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် /မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။ - B.Com (သို့) တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရပြီး LCCI (Level I,II,III) အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်အနည်းဆုံးရှိရမည်။ - အသက် (၂၅) နှစ်အထက်ရှိရမည်။ - Computer Ms Word နှင့် Excel (Advance Level ) ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - သွက်လက် ထက်မြက်သူဖြစ်ရမည်။ - စာရင်းဇယားများကို Report တင်ပြနိုင်ရမည်။ - P & L,Balance Sheet,Cash Flow,Statements,Reconciliations များပြုစု တင်ပြနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com ,gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 ရုံးခန်းလိပ်စာ –ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ အင်းစိန်လမ်းမကြီး )
Junior Account – Female –5Posts / လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် / ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်
မင်္ဂလာပါရှင်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် တွင်ရှိသော ဆေးဝါးဖြန့်ချီသောကုမ္ပဏီကြီးတွင်အောက်ပါဝန်ထမ်းအမြန်လိုအပ်နေပါသည်။ 1.	Junior Account – Female –5Posts / လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် / ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် •	Bcom (or) Bachelor of Accounting (or) Any Graduate + Diploma of Accounting UK •	Working Experience in 1 year •	Excel can use properly မှတ်ချက်။။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံတစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊Viberဖြင့်လည်းကောင်း၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းလာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr4@gmail.com -, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com ,gasrecruit.hr7@gmail.com, Phone No.- 09 262223783 ,09-262223784 , 09 977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း၊အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်းမှတ်တိုင် အင်းစိန်လမ်းမကြီး ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Junior Accountant - Female (5)Posts
******************** URGENT REQUIREMENT ******************* မင်္ဂလာပါရှင့် Cosmetic Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါ ၀န်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ Junior Accountant – Female ( 5) Posts/ Salary – 200000 Kyats/တာမွေမြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - အသက် ၃၀ နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။ - LCCI Level III အောင်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၁ နှစ် ရှိရမည်။ Emailဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com , gasrecruit.hr1@gmail.com , gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
Location in : Thamine
GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော တာမွေမြို့ နယ်တွင်ရှိသော Companyကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ Junior Accountant (Femal-10Post) – 150,000(or) 200,000 - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - B.com ဦးစားပေးမည်။ - LCCI Level -2 အောင်မြင်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (1) နှစ်ရှိရမည်။ - ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်မူတည်၍ လစာကွဲပြားမည်။ - Computer ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ (Excel ,PageMaker ) - အသက် (20) နှင့် (35) ကြားဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် *** ၀န်ထမ်းတိုင်းနေ့လည်စာကျွေးသည် *** အထက်ပါ လိုအပ်လျက်ရှိသော Job Position များအတွက် E mail ဖြင့်၎င်း၊ လူကိုယ်တိုင်၎င်းလာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr4@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr3@gmail.com Phone No.- 09 262223784, 09 977125251,09 262555438, 09 263121101 ရုံးလိပ်စာ နေရာ ။	။Myanmar Professional Training Centre @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း၊ အမှတ် (၂၉)၊ပထမထပ်၊ လှည်းတန်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။
<<<<<<<<<<<<<<< “ URGENT POSITION ”>>>>>>>>>>>>>>>>> Yangon မြို့ ရှိ သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ် အနီးတစ်ဝိုက်တွင်ရှိသော GAS Agent နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ကုမ္မဏီ ကြီးများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ဝန်ထမ်းများ အမြန် အလိုရှိနေပါသည်။ 1.	Junior Accountant / Female (5) Posts / Salary – Negotiable -	Any Graduate. -	LCCI Level III. -	(3) Years Experience in related field. Email ဖြင့်၎င်း၊ လူကိုယ်တိုင် လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com , gasrecruit.hr1@gmail.com Phone No.- 09 262223783, 09 970539386,09 262555438, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။